Sheekh Nuur Baaruud oo ciidamo dhar cad ka dalbaday dowladda Soomaaliya (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Nuur Baaruud oo ciidamo dhar cad ka dalbaday dowladda Soomaaliya (DHAGEYSO)
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha heer Qaran ee dalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qaati billaahi ka taagan yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhibaato weyn ku haaya howlaha ay dalka ka haayaan.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa xildhibaanadaasi ku sheegay inay yihiin kuwa doonaya in loo fulliyo arrimo iyaga ugaar ah, isagoona dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay siiso ciidan dhar cad ah oo ka hortaga cid kasta oo dhibaato ku haysa howlaha ay haayaan.
“Waxaa u baahannahay ciidan dhar-cad ah oo naga celiyo rag baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, oo degmo iyo tuulo u dacwoonayo, waxay kuwaasi carqalad ku yihiin howlahii aa haynay, maxaa yeelay iyagoo soo socdo ayay kuusoo galayaan, waxayna ku dhahayaan, maxaa degmadeedii iyo tuuladeedii wax ugu diri weysay, annagane qaab gobol ayaa wax u gaarsiinaa gurmadka” Sidaasi waxaa yiri Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Dhinaca kale, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa sidoo kale dowladda ugu baaqay inay wax ka qabato dhibaatadda haysata dadka jecel inay ka qeyb-qaataan gurmadka ee ku nool dalalka dibaddaha balse aanay lacagaha badan soo marsiin karin xawaaladaha Soomaalida ah.
Wuxuu Sheekh Nuur Baaruud Gurxan arrintaasi ku sheegay inay ugu wacan tahay in dadka lacagaha soo dhiibayo ay ka baqayaan in lagu eedeeyo inay lacagaha u dirayaan dad argagaxiso ah, balse ay runtu tahay in lacagahaasi loo wado dadka ay abaaruhu saameeyeen.
“Dadka Soomaaliyeed ee soo gurmanaya islamarkaana wax dhiibaya, waxaa ku adag lacagta meesha ay soo marin lahaayeen, wax badan ayay dadkaasi nagala hadleen, dowladda Soomaaliyeed wax uun manoo sameyn kartaa, maxaa yeelay lacagaha ay dadkaasi soo dirayaan hadii ay badan tahay, waxaa lagu eedeynayaa inay lacagahaasi u dirayaan argagaxiso” Ayuu hadalkiisa raaciyay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan